Xidigis (Af Ingiriis : Astronomy; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) sidoo kale loo yaqaano Cilmi Fallag iyo Cilmiga Xidigaha waa cilmiga barshada Meereyaasha, Xidigaha, dayaxaanta, Galaagsiyada iyo dhamaan Koon eeynu ku noolnahay.
Cilmiga xidigiska oo loogu magac daro Hooyada Sayniska, ayaa waxaa ka qeyb qaatay kobcintiina culimo xidis oo taariikhda Islaamka door weyn ku leh. Waxaana nimankaan ka mid ah Yaqub ibn Tariq, al-Battani, al-Sufi, al-Tusi kuwo kale.  Archived Luuliyo 22, 2010 // Wayback Machine
„Bal indhihiinna kor u qaada oo eega. Yaa waxyaalahaas uumay? Waa kan ciidankooda tirada ku soo bixiya, oo kulligoodba magacyo ugu yeedha. Itaalkiisu wuu weyn yahay oo isagu wuu xoog badan yahay, oo sidaas daraaddeed midkoodna ma dhinna.”
Ku raaxayso quruxda layaabka leh ee koonkanaga markaad daawanayso bandhigga riwaayadaan. Maxay kuu muujinaysaa Abuuraha?: The Wonders of Creation Reveal God’s Glory
Xidigiska Islaamka oo qoray Owen Gingerich: faculty.kfupm.edu.sa
Culimada Islaamka ee culuunta xidigiska Door weyn ka qaatey umah.net Archived Luuliyo 22, 2010 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiddigis&oldid=224077"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Nofeembar 2021, marka ee eheed 22:07.